အဖွင့်ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်အပြီး မက်ဆီ ဘာပြောခဲ့လဲ? - Sports Gabar
June 16, 2019 June 16, 2019 - by Lu Nyochaw
အာဂျင်တီးနားအသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ကိုပါအမေရိက အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ ကိုလံဘီယာအသင်းကို ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပြီးနောက် လီယွန်နယ်မက်ဆီက သူတို့ အနေနဲ့ ညည်းညူနေဖို့ အချိန်မရှိဘူးလို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
အာဂျင်တီးနားဟာ ကိုလံဘီယာအသင်းအပေါ် ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု အသာစီးနဲ့ ကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်း ဒုတိယပိုင်းအရောက်မှာ နောက်ကျသွင်းဂိုးတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို ခွင့်ပြုခဲ့ရတာကြောင့် (၂)ဂိုး၊ ဂိုးမရှိရလဒ်နဲ့ ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အာဂျင်တီးနားအသင်းအနေနဲ့ နောက်ပွဲစဉ်တွေမှာ အမှားခံလို့မရတော့တဲ့အနေအထားဆိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘာစီလိုနာ အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှူး မက်ဆီကတော့ ဖိအားတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပြီး လက်လျှော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောကြားသွားခဲ့တာပါ။ မက်ဆီက-
” ကိုလံဘီယာဟာ ဘောလုံးကို ကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ အပိုင်အခွင့်အရေးတွေတော့ ကျွန်တော်တို့လောက်မရခဲ့ပါဘူး၊ ဒုတိယပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ဂိုးရဖို့ တိုက်စစ်ကို အာရုံစိုက်နေခဲ့တာကြောင့် သူတို့ ဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးရရှိသွားခဲ့ပါတယ် ”
” ကျွန်တော်တို့ ဒါကို ကျော်ဖြတ်နိုင်အောင် အကောင်းဘက်ကနေရှုမြင်ရပါမယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ရင်ဆိုင်ရမယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေကို လက်ခံဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ၊ ရှုံးပွဲအတွက် ကျွန်တော်တို့ ညည်းညူနေဖို့အချိန်မရှိပါဘူး၊ ပွဲတွေကျန်သေးတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းတွေကို ဦးမော့ထားရပါမယ် ” လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
မက်ဆီဦးဆောင်တဲ့ အာဂျင်တီးနားအသင်းဟာ နောက်ထပ် အုပ်စုပွဲစဉ်တွေအဖြစ် ဇွန်လ (၁၉)ရက်နေ့မှာ ပါရာဂွေး၊ ဇွန်လ (၂၃)ရက်နေ့မှာ ကာတာ အသင်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်သွားရဖို့ရှိနေပြီး၊ ရလဒ်ကောင်းတွေပြန်ရယူနိုင်ဖို့ မက်ဆီက မျှော်လင့်နေပါတယ်။
အဖှငျ့ပှဲမှာ ရှုံးနိမျ့အပွီး မကျဆီ ဘာပွောခဲ့လဲ?
အာဂငျြတီးနားအသငျးဟာ သူတို့ရဲ့ကိုပါအမရေိက အဖှငျ့ပှဲစဉျမှာ ကိုလံဘီယာအသငျးကို ရှုံးနိမျ့သှားခဲ့ပွီးနောကျ လီယှနျနယျမကျဆီက သူတို့ အနနေဲ့ ညညျးညူနဖေို့ အခြိနျမရှိဘူးလို့ ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
အာဂငျြတီးနားဟာ ကိုလံဘီယာအသငျးအပျေါ ဘောလုံးပိုငျဆိုငျမှု အသာစီးနဲ့ ကစားနိုငျခဲ့ပမေဲ့လညျး ဒုတိယပိုငျးအရောကျမှာ နောကျကသြှငျးဂိုးတှကေို ဆကျတိုကျဆိုသလို ခှငျ့ပွုခဲ့ရတာကွောငျ့ (၂)ဂိုး၊ ဂိုးမရှိရလဒျနဲ့ ရှုံးနိမျ့သှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အာဂငျြတီးနားအသငျးအနနေဲ့ နောကျပှဲစဉျတှမှော အမှားခံလို့မရတော့တဲ့အနအေထားဆိုကျသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ဘာစီလိုနာ အာဂငျြတီးနားတိုကျစဈမှူး မကျဆီကတော့ ဖိအားတှကေို ကြျောဖွတျနိုငျအောငျကွိုးစားသှားမှာဖွဈပွီး လကျလြှော့သှားမှာမဟုတျဘူးလို့ ပွောကွားသှားခဲ့တာပါ။ မကျဆီက-
” ကိုလံဘီယာဟာ ဘောလုံးကို ကောငျးကောငျးထိနျးခြုပျနိုငျခဲ့ပမေဲ့ အပိုငျအခှငျ့အရေးတှတေော့ ကြှနျတျောတို့လောကျမရခဲ့ပါဘူး၊ ဒုတိယပိုငျးမှာ ကြှနျတျောတို့ ဂိုးရဖို့ တိုကျစဈကို အာရုံစိုကျနခေဲ့တာကွောငျ့ သူတို့ ဂိုးသှငျးနိုငျဖို့ အခှငျ့အရေးရရှိသှားခဲ့ပါတယျ ”
” ကြှနျတျောတို့ ဒါကို ကြျောဖွတျနိုငျအောငျ အကောငျးဘကျကနရှေုမွငျရပါမယျ၊ ကြှနျတျောတို့ ရငျဆိုငျရမယျ့ စိနျချေါမှုတှကေို လကျခံဖို့ အဆငျသငျ့ပါပဲ၊ ရှုံးပှဲအတှကျ ကြှနျတျောတို့ ညညျးညူနဖေို့အခြိနျမရှိပါဘူး၊ ပှဲတှကေနျြသေးတာကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ခေါငျးတှကေို ဦးမော့ထားရပါမယျ ” လို့ ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
မကျဆီဦးဆောငျတဲ့ အာဂငျြတီးနားအသငျးဟာ နောကျထပျ အုပျစုပှဲစဉျတှအေဖွဈ ဇှနျလ (၁၉)ရကျနမှေ့ာ ပါရာဂှေး၊ ဇှနျလ (၂၃)ရကျနမှေ့ာ ကာတာ အသငျးတှနေဲ့ ရငျဆိုငျသှားရဖို့ရှိနပွေီး၊ ရလဒျကောငျးတှပွေနျရယူနိုငျဖို့ မကျဆီက မြှျောလငျ့နပေါတယျ။
Previous Article လက်ရွေးစင်အသင်းကြီးမှာအရွေးခံခဲ့ရလို့ ၀မ်းသာနေတဲ့ ဖြူဖြူဝင်း
Next Article မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့ဘေးလ်အတွက်ဘိုင်ယန်ကကောက်ရိုးတစ်မျှင်လား?